Friday May 06, 2022 - 01:32:20 in Wararka by Super Admin
HARGAYSA(xogreeb.com)-Siyaasi Cali Maxamed Yuusuf "Cali guray” oo kamid ah siyaasiyiinta falanqeeyaha arimaha ka socda geeska Africa ayaa ka faalooday doorashada madaxwaynenimo ee somaliya oo lagu wado in ay qabsoonto 15bishan may oo ay maalmo kooban ina xigaan
Sidoo kale siyaasi cali guray ayaa farta ku fiiqay shakhsiyaadka lagu wado in ay iskugu soo hadhaan tartanka kama danbaysta ah ee madaxwaynaha ,rajada farmaajo iyo saamaynta madaxtinimada somaliya ay ku leedahay lacagtu!
Isagoo arimahaasi ka hadlaya wuxu yidhi;
Doorashadii somalia oo halkii ugu dambaysay ee doorashada madaxwaynaha aakhirkii soo gaadhay
"Doorashada Madaxwaynaha Somalia oo la muddeeyay in ay qabsoomi doonto bishan 15keeda ayay baraha bulshada qaarkood faafinayaan odoros runta aad uga fog oo odhanaya in Farmaajo uu wareegga koobaadba doorashada ku guulaysan doono. Musharaxa ku guulaysan kara wareega hore wuxu u baahan yahay in uu helo tirada labada aqal ee Baarlamanka kala badh iyo hal (50%+1) oo noqonaya 162 cod. Marka aynu eegno tirada musharixiinta muhiimka ah oo tiro ahaan laga yaabo in ay noqdaan 5 musharax ama ka badan suurogal maaha in mid ka mid ahi uu wareega koobaad heli karo codadka uu u baahan yahay (162). Shanta ugu muhiimsan waxay noqon karaan sadex ka soo jeeda reerka hawiye oo kala ah Shariif Sh Axmed, Xasan Sheekh, iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Musharaxa ku soo bixi doona doorashada ayaa laga yaabaa in sadexdan uu midkood noqdo karo. Labada musharax ee kale ayaa noqonaya Farmaajo iyo Saciid Dani oo iyaguna reerka daarood ah.
Sida aan filayo labada musharax ee ugu dambaysta isku soo hadhi doona wareega labaad ama sadexaad ayay suurogal tahay in labaduba ay noqdaan Hawiye. Hadii uu jiro heshiis sidii lagu doortay shirgudoonka Golaha Shacabka in musharixiinta isbedel doonka ahi hadba ka wareegga hore ugu cod bata ay isugu guuraan iyada hadalba ma jiro oo waxa laga yaabaa in Farmaajo laftiisa ay wax iska bedeli karaan. Dad badan ayaa rumaysan marka Farmaajo uu arko ama garto in wax guul ah dhiniciisa jirin markaa in uu taageeri doono Shariifka si uu markiisa u gudo abaalkii doorashadii hore, ilayn waa marka markeedii eh. Doorashadan sidii doorashooyinkii hore oo dhan kursiga Madaxwaynaha iyo ka RWha waxa iska yeelanaya labadii reer ee iyaga ay u xidhnaayeen Hawiye iyo Daarood balse kursiga Madaxwaynaha lama dhaafin karo Hawiye sida dhaqanka siyaasaddu ilaa hadda uu yahay. Waxa aynu ku garan karnaa labada Gudoomiye ee labada aqal ee Baarlamanka oo Dir iyo Digiliyo Midhifle ay kala qaateen. Kaambaynka doorashada Madaxwaynaha waxa kale oo muhiim cidda noqonaysa Raisul Wasaare ee laga gadayo ama uu u wato Musharaxa ku guulaysanaya doorashada. Inta saaxadda ka muuqata Siciid Dani ayaa ugu fadalo cadcad ilaa hadda in kasta uu Farmaajo ka dagaalami doono oo aanu rabin in uu ka soo ag dhawaado mucaaridkiisii ugu adkaa ee nafta isugu keeni jiray mudooyinkii dambe ee muddo xileedkiisu dhamaanayay ama dhamaadayba.
Ta ugu dambaysa meeshu waa Muqdisho musharax aan beeso qabin cidi danayn mayso xildhibaanada inta ugu badani waa "for sale” sayladana waa la isku hawaynayaa oo qiimuhu cirka ayuu isku shareeri. Markaa tu walba ka yaab iyo in natiijaduba ay noqon karto tu aan loo fadhiyin. Waayo doorashada Muqdisho saamaynta ugu wayn lacagtu iyadaa leh.